LOVE ISLAND AUSTRALIA ရာသီ ၁ သွန်းလောင်း: သူတို့ဘယ်မှာလဲ။ - သတင်း
ဤသည် Love Island သြစတြေးလျရာသီ 1 ၏သွန်းယခုမှတက်နေသောအရာဖြစ်တယ်
Love Island Australia ရာသီ ၁ သွန်းသည်စပိန်နိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားပြီးသြဇာညောင်းသူများနှင့်လှည့်စားနေသောမော်ဒယ်များဖြစ်လာခဲ့သည်။ Josh Moss နှင့် Amelia Marni တို့ကဲ့သို့ကျွန်းသူကျွန်းသားအချို့သည်အတူတကွနေထိုင်ကြသည်။ Tayla က Cassidy မှ Grant ကို st လီးယပ်စ်မှပေးသောအချိန်ကတည်းကအမြဲတမ်းခံစားရသည်။ Eli လိယက Villa တွင်မိန်းကလေးတိုင်းကိုစုစုပေါင်း fuckboy ကဲ့သို့ကစားခဲ့သည်။ သို့သော် Love Island Australia Season 1 သရုပ်ဆောင်သည့်နေရာသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသနည်း။ ဘယ်ကျွန်းကျွန်းသြစတြေးလျစုံတွဲများအတူတကွနေဆဲ? အရေးကြီးတာက Tayla သည် Dom နှင့်အတူရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
Tayla Damir သည် Grant Island Capp ဖြင့် Love Island Australia ရာသီ ၁ တွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူတို့အချင်းချင်းတည်ဆောက်ထားပုံရသော်လည်းသြစတြေးလျတွင်ထိတွေ့မှုမှထွက်ပေါ်လာခဲ့သည် Grant မှာရည်းစားတ ဦး လုံးရည်းစားရှိခဲ့ပါတယ် သူသည်ကိုယ်အဘို့နာမည်ကိုခံခြင်းငှါသာလျှင်တတ်နိုင်၏။
အကြွေး: Tayla Damir Instagram
ထိုအချိန်တွင်တေလာက ငါပေးတဲ့အချက်အလက်က Grant ကသူဟာ Love Island Australia ကိုသွားနေတဲ့ကောင်မလေးကိုသူ့စီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ဖို့နဲ့သူ့အတွက်နာမည်တစ်ခုလုပ်ဖို့ပြောခဲ့တယ်။ သူမသည်သိသာတဲ့, ဤအဘယ်ကြောင့်ငါမသိ, ဒီနှင့်အတူအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကငါ့စိတ်ထဲမှာအဓိပ္ပာယ်လုပ်မထားဘူးအရာဖြစ်တယ်။
သိသာထင်ရှားစွာ Tayla သည် Grant ကိုမှီဝဲလျက်နေ၏ Dom Thomas ကိုစတင်တွေ့မြင် Love ကျွန်းသြစတြေးလျရာသီ 1 သွန်းကနေ !!!! Dom သည်မူလက Shelby Mills နှင့်တွဲဖက်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင် Tayla နှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။
သူတို့ကလူတိုင်းကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတယ် သူတို့လက်ထပ်ခဲ့ကြသည် နှင့် Tayla ပင်အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ် ဖြစ်နိုင်သောကလေးအစီအစဉ်များ။
သို့သော်ကောင်းသောအရာအားလုံးအဆုံးသတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဇွန်လ ၂၀၁၉ တွင်၊ ဒိုနှင့်တေလာတို့သည်ခွဲနေကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် ။
Tayla Damir နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် AFL ကစားသမားအသက် ၂၆ နှစ်ရှိ Nathan Broad ။
ဗီလာရွာမှထွက်ခွာပြီးကတည်းက Tayla သည်သြစတြေးလျကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်သံအမတ်ဖြစ်လာသည် Showpo နှင့် MCoBeauty နှင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဆံပင် scrunchies ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက Tayla ကသူမသည်ကြီးမားသောကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီ, Grant က Crapp က villa ထွက်ခွာကတည်းကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ စောင့်ရှောက်ပါ၊ WHO စောင့်ရှောက်ပါ။ Love Island Australia Season 1 သရုပ်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ကသူပြပွဲအတွင်းမှာသူအိမ်မှာလျှို့ဝှက်ရည်းစားရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြသပြီးနောက်ပရိသတ်တွေအရည်ပျော်သွားတယ်။ သူက Tayla ကိုသူ့ကိုပြန်ခေါ်သွားဖို့တောင်းပန်ခဲ့တယ် မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ပေါ်လာသည် နှစ်ပတ်အကြာတွင်သူ၏ဟောင်း -au အတူ !! အရှုပ်တော်ပုံ !!
အကြွေး: Grant Crapp Instagram ကို
ရုန်းကန်နေရသော အချိန်မှစ၍ Grant သည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်လိုင်းကိုစတင်ခဲ့သည် တော်ဝင်အဝတ်အစား , အရာသိသာသူမိမိကိုမိမိမော်ဒယ်လ်။ မိမိအ Instagram ကိုအရသူလည်းအွန်လိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာပါပဲ။ Grant သည်ထုတ်ကုန်များ၊ ဖြည့်စွက်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးများကိုအဖြူရောင်ဖြူစေသည့်ပုံမှန်အတိုင်းပြုလုပ်ပေးသည်။ နှင့်သင်၏မြည်းကိုရိတ်ရန်သင်တုန်း။
Grant သည်သူ၏ရည်းစား Lucy Cartwright နှင့်အတူရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါစုံတွဲသည်အတူတကွအိမ်တစ်လုံးကို ၀ ယ်ခဲ့ကြသည် (သူ၏ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀ အနိုင်ရရှိသူအချို့သည်၎င်းဆီသို့ ဦး တည်သွားခဲ့သည်)၊ 20ပြီလ ၂၀၂၁ တွင်သူတို့၌မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်
ဒီ post ကို Instagram တွင်ကြည့်ပါ
GRANT CRAPP (@grant_crapp) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
နေထိုင်မကောင်းတဲ့ကောင်လေး Eden Dally ကတော့ Love ကျွန်းသြစတြေးလျရာသီ ၁ ကနေသူ့အိတ်ကပ်ဒုံးပျံ Erin Barnett နဲ့အတူစုံတွဲတစ်တွဲအနေဖြင့်ရွာသူရွာသားအဖြစ်မှထွက်ခွာခဲ့သည်။ ဒီစုံတွဲဟာပွဲမှာဒုတိယနေရာရရှိခဲ့ပေမယ့်finishedဒင်နဲ့အဲရင်တို့ပြပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာလကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။
အကြွေး: enဒင်ဥယျာဉ် Dally Instagram
ဒါဟာအားလုံးစတင်ခဲ့သည်။ Erin ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် အားလုံး YouTube ကိုပြောပြပါ သူမသည်ဆက်ဆံရေးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဖြစ်လာခဲ့သည်စွပ်စွဲဘယ်မှာ။ enဒင်ဥယျာဉ်ကဗီဒီယိုမှာပါတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ မှတ်ချက်ပေးလိုပါတယ်။ ငါကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုစစ်မှန်တဲ့ထင်ဟပ်မှုမဟုတ်ဘူး၊ ရန်လိုခြိမ်းခြောက်သူ၊
ထိုပြဇာတ်နောက်ပိုင်း မှစ၍ Worldဒင်သည် Mr World Australia ကိုသရဖူဆောင်းခဲ့သည် မတ်လမှာသူ့ကိုယ်သူရည်းစားအသစ်ရခဲ့တယ် - Cyrell Jiminez-Paul riedစတြေးလျတွင်လူကြိုက်များသောတီဗီရှိုးတွင်လက်ထပ်သည့်ပထမ ဦး ဆုံးအကွိမ်လက်ထပ်ထားသူ
Credit: Cyrell Jiminez-Paul
အောက်တိုဘာလ 2019 ခုနှစ်တွင် enဒင်ဥက္ကD္ဌကြေညာခဲ့သည် သူနှင့် Cyrell တို့သည်ကလေးတစ်ယောက်ကိုမျှော်လင့်နေသည်။
Instagram တွင်Edဒင်မှဤသို့ရေးသားခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်တို့သည် EJ နည်းနည်းလေးကလေးမွေးသောတရားဝင်ဖြစ်သည်! မနေ့ကလုပ်တဲ့လူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ @cyrelljimenezpaule သငျသညျအံ့သြဖွယ်မိခင်ဖြစ်စေမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားကိုတွေ့ဖို့မစောင့်နိုင်ဘူး။
ဒီမှာသူတို့ဘော်စတွန်အမည်ရှိသောသူ Lil ကလေးပါပဲ။
မျှဝေသည် ENဒင်ဥယျာဉ် (@dallyeden) မေလ ၁၀ ရက်၊ ည ၁၂း၅၇ တွင် PDT
theဒင်ဥယျာဉ်ပြဇာတ်ပြီးနောက်အဲရင်သည်မဲလ်ဘုန်းမြို့သို့အိမ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူမသည်ကျွန်းသူကျွန်းသားများဖြစ်သောဖရန်ကိုစ်၊ as လိယနှင့်ကက်စီဒီတို့နှင့်အတူရှိနေသေးသည်။
အကြွေး: Erin ဘား Instagram
ဒီဇင်ဘာလတွင် Erin သည်သူမ၏ချစ်သူသစ် Mike ကိုပွဲထုတ်ခဲ့သည်။
Erin ကသူမနှင့် Mike ကို Instagram ပေါ်တွင်ကြေငြာခဲ့သည် အတွက်ရွေ့လျားခဲ့ကြသည် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သူမကဤသို့ပြောခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်သည်အိမ်မှမနေခဲ့ဖူးသူ၊ ရည်းစားတစ် ဦး နှင့်တစ်ခါမှမ ၀ င်ခဲ့ဖူးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ဤမျှကြီးမားသောအရာဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်အမြဲအိပ်မက်မက်ခဲ့ဖူးသော်လည်းကျွန်ုပ်၌ရှိသည်ဟုမထင်ခဲ့သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်သည်။
သူကကျွန်တော့်ကိုနေ့တိုင်းရိုသေလေးစားစွာဆက်ဆံတယ်။ နေ့တိုင်းရယ်မောအောင်လုပ်တယ်။ နေ့တိုင်းကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေကိုကျောထောက်နောက်ခံပေးတယ်။ ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့သူကငါ့ကိုနေ့တိုင်းပျော်ရွှင်စေတယ်။
အကြွေး: Erin Basset Instagram
သူမသည်မကြာသေးမီက ၁၈ နှစ်အရွယ်ရထားလမ်းတစ်လျှောက်ဥရောပတစ်လွှားခရီးသွားခြင်း၊ အမ်စတာဒမ်၊ ပဲရစ်၊ ပရာ့ဂ်နှင့်ဘာလင်သို့သွားသည့်ခရီးကိုသွားခဲ့သည်။
Erin သည် So Fetch ၏သြစတြေးလျကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဖက်ရှင်လိုင်းကိုလည်းဖန်တီးခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ 2020 ခုနှစ်, Erin ဘားသြစတြေးလျရဲ့ငါကဒီမှာတစ် ဦး က Celebrity Get ငါ့ကိုထဲကငါ့ကိုယူခဲ့ပါတယ်။
Dom Thomas သည် Love Island Australia ၁ ရာသီမှသရုပ်ဆောင်အဖွဲ့ဝင် Tayla Damir နှင့်သူနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသောအခါပရိသတ်များအားအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ ဒိုသည် Shelby Mills နှင့်အတူ villa မှထွက်ခွာသွားသည် ဆက်ဆံရေးကိုချွတ်တောင်းဆိုခဲ့သည် ပြပွဲပြီးဆုံးရက်သတ္တပတ်။ Dom ကငါတို့မိတ်ဆွေကောင်းတွေအဖြစ်အကောင်းဆုံးကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ တွင် Tayla နှင့် Dom သည်တရားဝင်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက Instagram post တွင် villa ၌သူတို့၏အချိန်ကိုထင်ဟပ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ Dom ကပြန်ပြောင်းကြည့်ပါ၊ အဆိုပါစုံတွဲသည်ဇွန်လ 2019 တွင်ကွဲကွာခဲ့သည်။
အကြွေး: Dom သောမတ်စ် Instagram
ထွက်ခွာကတည်းကဒိုကဲ့သို့သူ၏ ဦး ခေါင်းရိတ်လိုက်ပါတယ် ဗြိတိန်ရှိလူလတ်တန်းစားယောက်ျားလေး ။ သူသည်သူ၏စီမံချက်မန်နေဂျာအဖြစ်အလုပ်မှထွက်ခွာခဲ့ပြီးသူ၏ Instagram အရသူသည်ယခုခရီးသွားအကြောင်းအရာဖန်တီးသူဖြစ်သည်။ သူဟာဘာလီကနေဂျပန်အထိကမ္ဘာတစ်ခွင်ခရီးထွက်ခဲ့ပုံရတယ်။
ထိုအဘယ်အရာကိုတကယ်ချစ်စရာရဲ့သူနေဆဲ Love Island သြစတြေးလျရာသီ 1 သွန်းအဖွဲ့ဝင် Josh Moss နှင့်အတူ BFF ရဲ့ပါပဲ။
Cassidy McGill သည်သူမနေထိုင်ရာ villa တွင်နေထိုင်စဉ်အချစ်ကံမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သူမသည် Love Island Australia ရာသီ ၁ သရုပ်ဆောင်အများအပြားမှအသင်းဝင်များနှင့်အတူရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း၊ Grant Crapp၊ Elias Chigros နှင့် Josh Moss တို့နှင့်ရခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ပေါ်ထွက် Boot တက်ခံရအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
အကြွေး: Cassidy McGill Instagram ကို
ထွက်ခွာကတည်းက Cassidy ရှိပါတယ် အချိန်ပြည့် influ ဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသူ၊ ။ သူမကပြောကြားခဲ့သည်မှာလူတိုင်းသည်ငါတို့အားလုံးအားလုံးကိုလုပ်ရန် shitload ပေးရသည်ဟုထင်ကြပြီး၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်မလွယ်ကူပါ၊ ဤအလုပ်သည်အခြေခံအားဖြင့်ဘယ်တော့မှရပ်တန့်နိုင်ပြီးဖိအားများစွာရှိစေသည်။ သူမ၏ Insta တွင် 280k နောက်လိုက်များရှိသည်။
သူသည်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောကြောင့် Olay, Bondi Sands နှင့် Oral-B တို့အတွက် spon-con ပြုသည်။
Olivia Attwood သည်မင်းဖြစ်သည် ???
Cassidy သည်သူမအတွက် ၆၈,၇၇၄ ခုတွင်ကိုယ်ပိုင် YouTube ဗီဒီယိုကိုစတင်ခဲ့သည်။ သူမသည်ဗီဒီယိုများသူမစားသောအရာ, လူမှုရေးဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြားကျွန်းသူကျွန်းသားအချို့ပင်ဖြတ်တောက်, အထွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
Dom နှင့် Josh ကဲ့သို့ပင် Cassidy နှင့် Love Island Australia သြစတေးလျရာသီသရုပ်ဆောင်အဖွဲ့ဝင် Francoise Draschler သည် villa အပြင်ဘက်တွင်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများဖြစ်လာကြပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန် Instas တွင်ထူးခြားထင်ရှားသည်။
အပြောင်းအလဲများစွာတွင် Cassidy McGill ကသူမဆံပင်ကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပြီးသူမသည်ချစ်စရာကောင်းသည်ဟုထင်သည်။
သူမသည်ရည်းစားရှိတယ် - ဒါပေမယ့်သူကအဘယ်သူသည်ထုပ်အောက်မှာပဲ!
as လိယ Chigros
Island လိယသည် Love Island Australia ရာသီ 1 သွန်းလောင်းခြင်းဖြင့်အတော်ပင်နာကျင်ခဲ့သည်။ Cass, Francoise နှင့် Millie တို့အားလုံးသည်သူတို့၏ sl လိယပိုင်အပိုင်းအစကိုသူတို့လိုချင်ခဲ့ကြသော်လည်းသူသည် Insta တွင်တွေ့ခဲ့ဖူးသောမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုထိမိလိမ့်မည်ဟု villa အားပြောပြပြီးနောက်ဘာမျှမတတ်နိုင်တော့ပါ။
သူသည်ဗီလာမှထွက်ခွာသောအခါသူနှစ် ဦး စလုံးနှင့်ချိန်းတွေ့သည်ဟုကောလာဟလများထွက်ပေါ်ခဲ့သည် ကက်စီဒီ နှင့် ပြင်သစ် ။
အကြွေး: Elias Chigros Instagram
အဆိုပါ surfer နီးပါး 100k Instagram ကိုနောက်လိုက်ရှိပါတယ်။ သူ၏ဘ ၀ သည် surfing၊ ဘာလီသို့သွားခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပူပြင်းခြင်းတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပုံရသည်။ သူသည်ဇုသအားကိုယ်တိုင်ထွင်းထုထားပုံရသောလူတစ်ယောက်ကဲ့သို့ Eli လိယသည်အချို့သောမော်ဒယ်များကိုလုပ်နေသည် - သူ၏အစုစုသည်ဖြစ်သည် ဒီမှာ (ရပါတယ်)။
သူကပုံမှန်အတိုင်းနာရီ၊ Deliveroo နှင့်သွားအဖြူရောင်ဖြာသည့်ကိရိယာများကိုပုံမှန်လုပ်သည်။
သူဟာအလွန်ပူပြင်းတဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုချိန်းတွေ့သည် Effy ဟားဗတ် ... သူမသူမထိချင်သည့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မိန်းကလေးခဲ့ ??
သို့သော်ထိုစုံတွဲသည်နောက်ဆုံးဒီဇင်ဘာလ 2018 ခုနှစ်တွင်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြား Instagram ကိုအပေါ်ပုံခဲ့ကြသည်။
အကောင်းဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာသြစတြေးလျရာသီအချိန်ကုန်ဆုံးသရုပ်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သူ Josh Moss သည်သူတို့ကျန်ရှိနေသေးသောသူနှင့်ဆက်နွှယ်နေသည့်တစ်ခုတည်းသောကျွန်းသားဖြစ်သည်။ Josh နှင့် Amelia Marni တို့အတူတကွရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
အကြွေး: Josh Moss Instagram
နောက်လိုက် ၂၈၀ ယောက်ရှိသော Josh သည်ဥရောပ၊ Marrakech နှင့်ဘာလီသို့ Amelia နှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ခွင်ခရီးလှည့်လည်ခဲ့သည်။
Josh သည်ပြဇာတ်ရုံမှ Millie နှင့် Mark နှင့်အကောင်းဆုံးအိမ်ထောင်ဖက် Dom Thomas နှင့် Tayla Damir တို့နှင့်အတူပြသခဲ့သည်။ ဂျော့ရှ်နှင့်ဒိုပင်ရှိသည် သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Instagram ကိုစာမျက်နှာ နှင့်ယခုပြုပါ podcasts မှ အတူတူ '' Dom & Josh နှင့်အတူထောက်လှမ်းရေးဆိုင်းငံ့ '' !!!
Francoise သည် Millie Fuller နှင့် Elias Chigros တို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတြိဂံတွင်သူ့ကိုယ်သူတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်သူမကိုယ်တိုင်သူမအိမ်သို့ထွက်ခွာခဲ့သည်။
သူမကျွန်းသူကျွန်းသားများကဲ့သို့ Aus Francoise ရှိစားသောက်ကုန်ဖြန့်ဝေရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ သူမတွင်နောက်လိုက် 88.5k ရှိသည်။
အကြွေး: Francoise Draschler Instagram ကို
Cassidy McGill နှင့် Erin Barnett တို့နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအပြင် Francoise ကို Love Island Australia ရာသီ 1 သရုပ်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော Shelby Mills နှင့် Edyn Mac တို့နှင့်ပြသထားသည်။
အကြွေး: Francoise Draschlar Instagram ကို
Edyn '' Mac 'Mackney
Mac ကသူမကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် YouTube vlog လွန်ခဲ့သော ၄ လက။ သူမသည်လက်ရှိတွင် 76k စာရင်းပေးသွင်းထားသူများဖြစ်ကြသော '' ငါနဲ့မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုဖြေကြားခြင်း '' အဖြစ်ကငါ့ရည်းစားတွေအကြောင်းကောင်မလေးကိုအဆင့်သတ်မှတ်ပေးတယ်။
အကြွေး: Edyn Mac Instagram ကို
Love Island သြစတြေးလျရာသီ ၁ သရုပ်ဆောင်များတွင် Mac သည် Shelby ကိုအများဆုံးမြင်သည်။
သူမ၏ရည်းစားဟုခေါ်သည် Apollo Jackson , ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှော်, ဂီတအနုပညာရှင်နှင့် DJ သမား - အချို့သော CV ကို။ သူလည်း The Bachelor တွင်ထင်ရှားသည် , သူတို့ကဇန်နဝါရီလအတွင်း၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ သူတို့ကတစ်နှစ်ကျော်အတူတူခဲ့ကြရတယ်။
Shelby Mills က
Dom နှင့်အတူကွဲကတည်းက , Shelby ရည်းစားအသစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်, Harry Bink ။ ဟယ်ရီဟာအလွတ် motorcross မြင်းစီးသူရဲရဲ့။
အကြွေး: Shelby Mills က Instagram ကို
Shelby ရဲ့, ထူးခြားဆန်းပြားသောနေရာများအတွက်သူ့ကိုယ်သူ၏ဓါတ်ပုံရိုက်ယူပြီး spon-con မြှင့်တင်ရန်, အချိန်ပြည့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်လာသည်။ သူမသည် 156k နောက်လိုက်ရှိပါတယ်။
Justin Lacko ကိုဘယ်သူမေ့နိုင်မလဲ ?? ၎င်းပုံစံသည် Miller Fuller နှင့်တွဲဖက်ပြီးစီးရီးအများစုအတွက်သူသည်ကျွန်းသူကျွန်းသားများကဆိုးရွားလှသည့်ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုမခံရမှီအထိဖြစ်သည်။
အကြွေး: Justin Lacko Instagram
Justin ကသူ့ကိုယ်သူသြစတြေးလျနိုင်ငံမှာမင်းကနေရာတစ်ခုမှာအိတ်ဖွင့်ပေးတယ်။ သူကဆဲဆဲမော်ဒယ်အေဂျင်စီမှတက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့နှင့်ဟုတ်တယ်, သူနေဆဲမထိုက်မတန်ပါပဲ။
သူဟာ villa မှာကံမကောင်းပေမယ့်, Justin ဟာသူ့ရဲ့ရည်းစားအသစ် Anita-Barone Scott နဲ့အတူလူသိရှင်ကြားဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။ သူတို့အတူတူသူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးကလေးမျှော်လင့်ပါတယ် !!
ဇန်နဝါရီလတွင် Justin သည်မိမိကိုယ်ကိုကလေးငယ်အဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့သည် အတူတကွ: ဂုဏ်ယူမိဘများ! @neets___ ငါအသေးစားငါ့ကိုမျှော်လင့်နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးလေးမွေးဖွားဖို့သွေးထွက်သံယိုစောင့်ဆိုင်းလို့မရပါဘူး။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကတည်းကဒီကိုင်ထားခဲ့, ငါတို့လကျော်ဖြစ်ကြသည်! ချစ်သူ
ဒီမှာ Justin ရဲ့ကလေးပဲ !!
Leo Jace Barone-Lacko ကမ္ဘာကြီးကိုကြိုဆိုပါတယ်။ မေလ (၁၁) ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ မင်းကိုထာဝရတန်ဖိုးထားနိုင်မယ့်ပုံ။ မင်းကိုချစ်တဲ့အချစ်ကခြွင်းချက်မရှိ ❤️
မျှဝေသည် Justin 2:22 pm တွင် PDT မှာ, 2020, မေလ 16, 2020 (@justinlacko)
Shelby နှင့် Cassidy ကဲ့သို့ပင် Amelia တွင်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ရှိသည် ယူကျု့ချန်နယ် ။ သူမနှင့်ရည်းစားဂျော့မော့စ်၏ဗီဒီယိုများ၊ သက်သတ်လွတ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနှင့် 'ချစ်သူရည်းစားနှုန်းထားများကိုငါ့အ ၀ တ်အစားများ' ဟုခေါ်သည့်မက်စ်တစ်ခုမှာ - Mac ၏ညာဘက်နှင့်ဆင်တူသည်။ သူမရဲ့ရုပ်သံလိုင်းမှာ 80k ကျော်ကြည့်ရှုသူများရှိတယ်။
အကြွေး: အမလီယာ Marni Instagram ကို
Millie Fuller ကသူမယောက်ျားတွေကိုမျှမျှတတဝေမျှပေးခဲ့တာကြောင့်လူတိုင်းကသူမကိုစိတ်ကူးခဲ့ကြသည်။ John James နှင့် Elias Chigros တို့နှစ် ဦး စလုံးသည်သူမနှင့်အတူကြိုးစားခဲ့သော်လည်းအခြေအနေနှစ်ခုလုံးတွင်မှန်ကန်မှုမရှိပါ။ များသောအားဖြင့်သူမသည် Justin Justin Lacko နှင့်တွဲဖက်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင် Millie သည် Mark O'Dare နှင့်တွဲဖက်ပြီးထိုဇနီးမောင်နှံသည် villa ကိုအတူတကွထားခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာafterပြီလအထိပြပွဲပြီးနောက်လပေါင်းများစွာနေခဲ့ဖူးတယ် သူတို့ခွဲတဲ့အခါ ။
အကြွေး: Millie က Fuller Instagram ကို
ထိုသို့မကောင်းသောချိုးတက်ခဲ့ကြရပေမည် သူတို့ Instas တွင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သူတို့၏ချစ်စရာကောင်းသောဓါတ်ပုံများကိုဖျက်ပစ်ခဲ့သည် ။
မီလီနေဆဲ တကယ် တစ်ယောက်ကသူမကို Insta တွင်အခြားပို့စ်တစ်ခုပေါ်လာသည်။
Millie သည် PrettyLittleThing၊ Bondi Sands နှင့်အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးအတွက်ကမကထပြုသည့်အကြောင်းအရာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ spon-con သွားသကဲ့သို့, သူမဖြစ်ကောင်း Love Island သြစတြေးလျရာသီ 1 သွန်းထဲကအကောင်းဆုံးလုပ်နေပါတယ်။ သူမ၌ Instagram နောက်လိုက် ၂၃၀,၀၀၀ ရှိသည်။
Natasha Cherie စီးရီးထဲမှာအစောပိုင်းကထွက်ခွာနှင့် villa အတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေရန်စီမံခန့်ခွဲမပေးခဲ့ပါဘူး
သူမသည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ရှိပါတယ် ယူကျု့ချန်နယ် သူမကပဲ bikinis နှင့်အဝတ်အစားအပေါ်ကြိုးစားပါတယ်ခဲ့ကြသည်။ လူ ၅၀၀၀၀ ဟာသူမရဲ့ရုပ်သံလိုင်းကိုစာရင်းသွင်းထားပါတယ်။ Natasha သည်ပါ့မြို့ရှိဇိမ်ခံပစ္စည်းနှင့်အလှပြင်ဆိုင်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်သည်။
အကြွေး: Tasha Cherie Instagram ကို
Millie ကဲ့သို့ပင်သူမ PrettyLittleThing နှင့်သဘောတူညီမှုရပြီးသူတို့၏ Instagram ကို 168k နောက်လိုက်များဖြင့်မော်ဒယ်လ်လုပ်သည်။
• Love Island Australia - ဘယ်စုံတွဲတွေအတူတူရှိနေသေးလဲ။
•ဉာဏ်စမ်းပဟေLoveိ - ဘယ်ကျွန်းမှာချစ်ကြိုက်သြစတြေးလျကိုချစ်ကြမလဲ။
• T ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်းရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးနားချင်းဆက်မှီအခမ်းအနား၌သူလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသည်၎င်း၏အရုပ်ဆိုးခေါင်းကို ag ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့သည် နေပြည်တော်
သင်၏နှလုံးထဲရှိ Umbrella Academy ပုံစံအပေါက်ကိုဖြည့်ရန်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အလားတူပြပွဲတိုင်း
ဤသည် Clueless သွန်းထုတ်လွှတ်ပြီးကတည်းက 25 နှစ်, ယခုမှတက်ဖြစ်ကြသည်
Night Stalker စုံထောက် Gil Carrillo ဘယ်မှာလဲ။
သင်လွယ်ကူသော 4.0 လိုအပ်လျှင်ရွေးချယ်ရန်အကောင်းဆုံးအတန်းများ
MMA ကို လုပ်၍ သင့်ကိုတစ်ဝက်လောက်ထိုးနိုင်သည့်မိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံပါ
နောက်ထပ် Coleen ရွန်နီမှတ်စု ၂၇ ခုနှင့်အတူနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်မံရိုက်ကူးပါ ဦး
အမ်မလီ Canham ကားအဘယ်သူနည်း ၂၂ နှစ်အရွယ် YouTuber သည်တစ်မိနစ်အလုပ်အတွက်ပေါင် ၇၀၀၀ လျှော့ချခဲ့သည်
Gothicc ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် Duke Memes ဘယ်လိုလုပ်ပြီးငါတို့ကျောင်းတွင်အရေးကြီးသောကိစ္စများပေါ်ပေါက်စေသနည်း